Mustaqbalka Isdhaxgalka Isticmaalaha: Beyond Touchscreens | Martech Zone
Infograafigani ka yimid Dukaan Smart ka hadlayaa mustaqbalka is-dhexgalyada isticmaaleyaasha ee ka baxsan shaashadda taabashada. Waxaa laga yaabaa in adeegsadaha ugu horumarsan ee isticmaala ee aan maanta isticmaalayo Apple Watch. Isku-dhafka taabashada badan, cadaadiska, badhannada, iyo garaacisyadu way adag yihiin. Iyo farahayga waaweyn, had iyo jeer maahan khibrad aan xuduud lahayn. Waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka!
Isdhaxgalka Isticmaalaha Mustaqbalka iyo Isdhexgalka
Dukaan Smart waxay cadeyneysaa teknoolojiyada qaarkood oo qarka u saaran inay beddelaan isdhexgalka isticmaalaha:
Holographs - Microsoft horay ayey u rartay Hololens waxayna furtay wajiyo horumarineed. Elon Musk ayaa soo bandhigay qaar tusaalooyinka isku xidhka holograafiyada iyo sidoo.
Diodorooyinka Iftiiminta Nadiifka ah (OLED) - Waxaan hadda leenahay qaab fidsan oo dhexdhexaad ah, laakiin adag, iskudhafyo ku saabsan kiniiniyada, laptop-yada iyo shaashadaha. Si kastaba ha noqotee, tiknoolajiyada OLED waxaa loo isticmaali karaa isdhexgalka dabacsan. Qiyaas mustaqbal meesha casrigaaga casriga ahi uu u awood badan yahay sida kombiyuutar kasta oo desktop ah, oo aad fadhiisan karto dukaanka kafeega oo aad kala bixi karto oo aad kala bixin karto shaashaddaada 30 inji ah Ama waxaa laga yaabaa inay si toos ah ugu dhisantahay dharkaaga!
Isdhexgalka Maskaxda Maskaxda - Muddo sannado ah, cilmi-baarista caafimaadku waxay si fiican u hagaajinaysaa isdhexgalka nidaamkayaga neerfayaasha. Teknolojiyada cusub ee dhijitaalka ah, oo ay karti u leedahay teknolojiyadda xisaabinta la qaadan karo oo awood leh, ayaa ka jawaabeysa xawaare ku habboon maskaxda maskaxda isdhexgalka farsamada. Qalabka cusub, sida Dareenka, ka faa'iideysiga baaritaanka elektaroonigga (EEG) si loo dhexgalo mowjadaha maskaxda ee dhabta ah si ay ula falgalaan codsiyada dibadda.
Xiriiriyaha kaliya ee adeegsadaha ama isdhexgalka ee aan aaminsanahay in khaladaadka infographic-ka uu yahay cod aqoonsi. In kasta oo ay horay u noqotay mid guud, mustaqbalka amarrada codku waxay noqon doonaan kuwo aad uga sarreeya mustaqbalka dhow.
Iyo xitaa maanta, our Amazon Echo gabi ahaanba waa wax cajaa'ib leh marka la aqoonsado amarrada codka iyo ka jawaab celinta si sax ah. Fikradayda, way ka fiican tahay aqoonsiga codka sida Apple's Siri.
Tags: maskaxdaogaanshaha mawjada maskaxdaemotivholograafinterface holographichololensxakamaynta maskaxdaoledDiodorooyinka Iftiiminta Nadiifka ahTaabashadda taabashadamuraayadaha taabashadaisdhexgalka isticmaalahaisweydaarsiga isticmaalaha
Sidee Musharaxiinta Madaxweyne U Isticmaalayaan Suuqgeynta Emailka